Deg Deg:Madaxweynahii Hore Xasan Sheekh Maxamud Oo Dagaal Tukaraq iyo Heshiis Itoobiya ka hadlay
June 21, 2018 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Wararka Maanta, Wararka Sool Iyo Tukaraq 3
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Xassn Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu soo bandhigay qorshe cusub oo lagu baajin karo dagaalada iyo xiisaha ka taagan gobalka sool.
Xasan Sheekh ayaa ugu horeyn waxa uu tilmaamay in shacabka somaliyeed ee ku dhaqan deegaanada gobalada dalka ay la daalaa dhacayaan doro iyo marxalado kala duwan oo isugu jira abaaro,fatahaado iyo colaado,hase yeeshe gundhigga dhibaatooyinka oo dhan waxay ka soo butaacayaan hal il oo ah dowlad xooggan oo ralli laga wada yahay lana wada aqbalsan yahay oo meesha ka maqan.
Si kastaba ha ahaate, dhibaatooyinkaas aan kore ku so xusay iyo kuwa kaleba waxay CAQABAD ku yihiin badbaadada shacabka ay daashadeen colaaduhu kuwa hore iyo kuwa dambaba haddaba hoggaamiyayaasha maanta ee heer kasta leh ha qaateen hana tixgeliyeen mabda’a ah “HA UGA DARIN HADDII AADAN DAWYN KARIN
Qormadaan kooban waxaan rabaa inaan uga hadlo arrinta XANUUNKA badan ee ka socota TUKARRAQ.
In ka badan 30 sano waayo aragnimo ah ayaan u leenahay in khilaafyada lagu xalliyo CUDUB CIIDAN lagumana soo guuleysan mar qura.
Haddaba, walaalaha isfaham waagu u dhaxeeyo waxaan ugu baaqayaa qodobada soo socda:
3. Ka dibne la billaabo wada hadal dhexdooda ah oo ay hoggaaminayaan dhexdhexaadiyaal iyo
fududeeyaal Soomaali ah o oka dhaca TUKARRAQ lafteeda
yaa ka dhagaysanaya culusoow?
ninku soow kii aan naqaanay maaha ?
mise sida transmissionka baabuurta baa “rebuilt” lagu sameeyey? oo xaluu dhashay
waa ninkii dabada kasoo riixay burtinle baa galnusa
Xassan Shiikh,Xassan Shiikh dambiyada uu ka galay soomaliweeyn ilaahay (swt) ha ka leexiyo reerkiisa.ILLaa reerkiisu waa soomaaliya.
Waxba ha noo sheegin Dambiile yahoow Ilaahay (swt) iyo Ummadihiisa ka galay dambiyada badan.Isagaa koow ka ah kuwa wada dagaalka gardaradaa ee ay hargeeysa soo qaaday.Isagaa Hargeeysa kala shaqayn jirey dhibaataynta Daarood.Soo kii Turgi kula shiray Siilaanyo oo la yiri waxay ku soo wada heshiiyeen in puntlaan labada gees ay dagaalo uga soo qaadaan.Waana kuwii Mooryaanta Habar Gidir dagaalka ku soo qaaday Gaalkacyo oo Mooryaantii Hawiye lagu laayey aaga Gaalkacyo.Isaaqna waa kuwii dadka shacabkaa ku xasuuqay KALSHAALE.Tuug Ilaahay iyo Islaamba beeniyey.Qofkii xalaashada maalka ummada oo ka shaqeeya xumaynta ummada Ilaahay waa mid beeniyey Kalaamka Ilaahay (swt).Waligiisba ha tukado.Xassan Shiikh waa dambiile run ah.Dambiyada uu ka galay shacabka soomaaliyeed Ilaahay (swt) ha ka duwo caruurtiisa soomaaliyeed.Sun buu siiyaa caruurtiis.Horaa loo soo ogadaaday oo caruurihii ay aabayaashood xadi jireen xoolihii ummada soomaaliyeed way wada SAAQIDEEN illaa waxay ku soo koreen maal agoomeeda.Nabi Muxmmad (scw) baa ku yiri Asaxaabtiisii qofkii kas u cuna maalka dawlada waa qof liqay DHINBILO DAB AH.Saa saxaabi baa ku yiri Rasuul Alloow see loo liqi karaa dhinbilo dab ah?Suuye Rasuulkii war maalka dawladu waa maal agoomeed.Qofkii ku cuna si an sharci ahayna waxuu la mid yahay mid liqay dhinbilo dab ah.Dadka maanta soomaali iyo soomaaliya madaxda u ah waxaa say u badan yahiin.Waayo kuwa laaluusha qaataa waa la mid.Kuwa bixiyaana waa la mid.
Xassan haddii uu arko in ay hargeeysa gacan sarayso ma uu yiraahdeen nabada ha laga shaqeeyo.Markii uu isagu sheeganayey madaxweynaha nabad ma uu ka shaqeeyey?Beenloow weeye.